Were Mara! Bridging na Technology Technology Gaps | Martech Zone
Were Mara! Bridging na Technology Technology Gaps
Tọzdee, Eprel 3, 2008 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
In 2006, M nwere ike ịbụ na a obere akaghi aka mgbe m buru amụma na 2007 ga-afọ nke onyeicalzi ọrụ interface mwekota. Ọ baghị uru, mana ụfọdụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ya!
n'ihi na 2008, ekwuru m amụma ọzọ 'micro' - gụnyere email ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ExactTarget kwupụtara atụmatụ a n'oge na-adịghị anya ntọhapụ nke ọdịda peeji nke. Fọdụ ụlọ ọrụ na-ewere ya ntakịrị n'ihu, ọ bụ ezie!
Nkọwa nwere ike ịbụ amụma m!
Izu a, enwere m obi ụtọ ịgwa Brian Deagan, onye isi oche nke Ama. Ekwuola m tupu otu o siri sie ike maka ndị na - ere ahịa ka ha mepụta atụmatụ mgbe ha na - ere ahịa. "Ogbe na gbawara" bụ ụkpụrụ n'ihi na oge niile na-eme na-eme n'ezie nke email karịa nkwadebe. Ọ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ mere mkpọsa na 'ụbọchị' na ha leghaara anya ma mkpọsa ahụ ọ dị mkpa ma ọ ga-ezute atụmanya ndị na-agụ ya.
Kemgbe 2003, Knotice nọ na-arụ ọrụ nwayo iji dozie ọdịiche ahụ! Knotice jikọtara email, ahịa mkpanaka, ibe weebụ, data nyocha, nyocha na okwu ọchụchọ iji kesaa nkwukọrịta ezubere iche niile ndị na-ajụ ase. Kama 'ịkụ azụ na dynamite', Knotice na-etinye nri kwesịrị ekwesị n'ebe kwesịrị ekwesị!
Ihe Nlere nke ire ahia otutu
Achọrọ m Google maka oghere maka nwa m nwanyị bụ Nikon D40 ma mechaa webụsaịtị. Nchịkọta ga-eweta usoro ọchụchọ m jiri wee nweta saịtị ahụ. Ọ bụrụ na agbanyeghị, weebụsaịtị ga-ama ugbu a na m nwere Nikon D40.
Ugbu a - mgbe m nloghachi gaa na saịtị ma ọ bụ - ọbụna ka mma - na ihe email na m debanyere aha na saịtị ahụ, ana m enweta ngwaahịa dị mkpa gbasara Nikon D40 site ugbu a. Ikekwe m na-aza ajụjụ ole na ole na nyocha banyere mmasị m nwere na foto, na ọdịnaya ahụ na-elekwasị anya ọbụna n'ihu ala, profaịlụ, ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa foto, akwụkwọ, na DVD.
Nke a bụ blurb si Detuo ha n'elu ikpo okwu Concentri:
Site na ikpo okwu anyị Concentri, anyị na-enye ụzọ dị mfe ma dị ike maka imepụta na ijikwa ihe dị mkpa nke ukwuu, nkwukọrịta ọtụtụ ọkwa n'ofe email, mkpanaka, na ọwa weebụ. Na Concentri, ndị na-ere ahịa nwere ike itinye ndị ahịa dijitalụ nke oge a aka ịzụlite ego, ma na-enwe ahụmịhe ọhụụ na-agbanwe agbanwe, na-eme ka ọrụ ahịa na-aga n'ihu, ma na-ewepu ụgwọ efu. Ma n'ihi na enyere ya aka, ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ naanị ihe ha chọrọ.
Kasị mma, Knotice anaghị achọ ka ihe niile kwadoro ma na-agba ọsọ na weebụsaịtị ha. Ha nwere oru ntanetị siri ike na onyinye ha nwere iji tinye aka na webụsaịtị gị - ma ọ bụ site na div ma ọ bụ iframe. Dị ike!
O yiri ka Knotice dị n'okporo ụzọ ahụ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na mbara igwe. Ọtụtụ web, nchịkọta na ndị na-enye ọrụ email na-arụsi ọrụ ike na-elekwasị anya na asọmpi ha na nke ha, ha na-echefu ezigbo okwu - azụmaahịa na-etinye oge dị ukwuu, mbọ, na ego na-etinye ihe ngwọta ndị a dị iche iche iji nweta nsonaazụ bara uru.
Ana m atụ anya ịhụ ihe ndị ọzọ site na Knotice!
Naanị n'ihi na ị nwere ike…
Abụ m onye nchịkọta Cisco I-Prize - Biko kwado echiche anyị
Apr 4, 2008 na 11: 45 AM
Chọrọ akwa oghere dị ọnụ ala maka Nikon D40? Sigma nwere 17-35mm f / 2.8-4 nke ị nwere ike ịnweta site na Cameta thru Amazon maka $ 240. Ọ bụ naanị oghere f / 2.8 nwere oghere elekere anya nke D40 chọrọ maka autofocus n'okpuru $ 1000, enwere m ezigbo obi ụtọ na nke m.
Ejirila lens ahụ were foto m kachasị ọhụrụ. Ọmụmaatụ.
Dị ka akụkụ, Agaghị m eji D40 ma ọ bụ lens ahụ karịa ka eserese ndị a, were D40 na lens Sigma 17-35mm f / 2.8-4 m gosiri ihe kpatara ya! 🙂